Nezvedu - Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd ndeye yakakwana simba manejimendi yekushandira sevhisi ine smart simba manejimendi seyakatangira bhizinesi, ichipa imwe-yekumisa masevhisi senge zviyero zvekushandisa, zvekutaurirana michina, gore software, kusanganisa system, kushanda kwehurongwa uye kugadzirisa zvine chekuita nesimba. kuyerwa uye manejimendi.
Iyo kambani inoita smart kuyera socket, simba-rekuchengetedza socket, simba strip, smart magetsi emagetsi metres, DIN-njanji mhando magetsi magetsi emagetsi, pre-yakabhadhara magetsi emagetsi metres, yakadzikwa yakawanda-basa elektroniki magetsi metres, yekutarisa terminal, data yekuwana chikamu , Multi-inoshanda dhijitari dhizaini, mita yemvura, iyo terminal, DTU, RTU, maneja wekutarisira uye inonyanya kufunga yekuunganidza magetsi emagetsi, uye mhinduro yehunyanzvi yezvigadzirwa zviri pamusoro.
Iyo kambani ine boka revadiki, nyanzvi, yepamusoro-soro yekumhanyisa musana uye manejimendi musana.Ikambani iri sosi-yakatarisana nesangano inotsigira kudzidza kubasa, kushanda mukudzidza, uye kusimbisa zvishoma kuwedzera zuva rega rega.
Kuvandudza ndiko kusingagumi kutsvaga kwevanhu vanoponesa, nehunyanzvi hwekuvandudza ruzivo, kuvandudza zvigadzirwa kuti uwane rubatsiro, kumira, kusarudzika, kuronga mazano ekuronga nguva dzese mukugadzirwa kwezvinhu, kugadzira, kushandira vatengi, nezvimwewo, uye kuita zvakanakisa zvigadzirwa mhando uye yekutanga-chikamu chebasa rebasa.
Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd. inogara ichiteedzera kune tekinoroji-yakatarisana uye inotengeswa-yakatarisana nemutemo wekushandisa, uye inoremekedza bhizinesi re "kugadzira-kugovana, kugovana, kufambira mberi, uye kubatsirana". Basa redu ndere kutarisa raramo yesimba uye kubatsira mukuchengetedza simba uye kupejimisa kudzikiswa.Zvedu tenet ndiko kuve kwekutanga-kirasi yebasa muparidzi mune smart simba manejimendi. Kuchengeta mupfungwa pfungwa yekuvimbika uye kukunda-kuhwina mibairo, isu tinovimbisa kupa zvigadzirwa zviri nani uye masevhisi kune wese mutengi. Nhengo yega yega yekambani yedu inoona hunyanzvi senge yavo yekusingaperi kutsvaga. Isu tichaita, semazuva ese, tipei kutamba kwakakwana kune edu matekinoroji musimba rekuyera simba uye manejimendi kubatsira isu vatengi vedu kuzadzisa zvinangwa zvesainzi simba rekushandisa, kuchengetedza simba uye kuderedza kushandiswa. Nekuita izvi tichagadzira kwedu kubatsira kune zviwanikwa-kuchengetedza nharaunda-inoshamwaridzana munharaunda.